စိတ်ဝင်စားဖွယ် Samsung ရဲ့ Display Panel ထုတ်လုပ်စမ်းသပ်ပုံအဆင့်ဆင့်
26 Nov 2018 . 12:28 PM
Samsung ကတော့ စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ Wearable Gadget တွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Display Panel တွေ အဆင့်ဆင့် ဘယ်လိုစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ထားသလဲဆိုတာ ဖော်ပြလိုက်ပါပြီ။ စက်ရုံကနေ Display Panel ထုတ်လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ Reliability Test Group ကနေ အရည်သွေး ပြည့်မီ၊ မပြည့်မီ ပထမဦးဆုံး စမ်းသပ်ပေးတယ်ဆိုပါတယ်၊ ဒီလိုစမ်းသပ်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုချင်တဲ့ Galaxy Device (ဥပမာ Galaxy A7 ၊ S9) အလိုက် Specification ကွဲပြားနိုင်သေးပြီး အများဆုံး ၁၂ ကြိမ်ခန့် စမ်းသပ်ရတယ်ဆိုပါတယ်။
ဒီစမ်းသပ်မှုမှာ Indoor ၊ Outdoor ၂ မျိုးလုံးပါဝင်ပြီး Indoor အတွက်ဆိုရင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပုံစံအတိုင်း ပြုလုပ်ထားတဲ့အခန်းငယ်ထဲမှာ နေရောင်၊ လမ်းမီးအလင်းရောင် စသဖြင့် Artificial Light တွေနဲ့ စမ်းသပ်ကြပါတယ်။ ဒီလို သဘာဝနဲ့အနီးစပ်ဆုံး ပြုလုပ်ထားတဲ့စမ်းသပ်ခန်းထဲမှာ Image Quality ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကို လိုချင်တဲ့အနေထားလိုက် အကြိမ်ကြိမ်စမ်းသပ်ရပြီး Indoor ၊ Outdoor ၂ မျိုးစလုံးမှာ Brightness ၊ Colour Clarity ၊ Image Noise နဲ့ တခြား Factor ဘယ်လောက်ရှိသလဲကအစ တင်ပြရပါတယ်။
ဒါကတော့ Display Panel တစ်ခုအနေနဲ့ Thermal Control ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ၊ အထူးသဖြင့် အပူလွန်ကဲတဲ့ Exynos Chip အသုံးပြုထားရတဲ့ Galaxy Device တွေ မိုဘိုင်းဂိမ်းကစားတာဖြစ်ဖြစ်၊ ကင်မရာရိုက်ကူးနေတဲ့အခါမျိုးမှာ အပူပိုထွက်တာမလို့ ဘယ်နေရာက Heat ပိုထွက်သလဲစသဖြင့် တိုင်းတာတယ်ဆိုပါတယ်။
Image & Thermal Test
အထူးသဖြင့် ရေစို၊ ရေစိမ်ခံ Galaxy Smartphone တချို့နဲ့ Smartwatch တွေအတွက်လိုအပ်ပြီး ဖုန်းအတွက်ဆိုရင် ရေအနက် ၁.၅ မီတာမှာ နာရီဝက်အကြာ စိမ်ထားစမ်းသပ်ရပါတယ်။
Waterproof Test 1
Waterproof Test 2
နာရီအတွက်ဆိုရင်တော့ 5ATM Standard အတိုင်း ရေကူးရင် Bend Stress ဒဏ်ခံနိုင်ရဲ့လားစသဖြင့် တိုင်းတာပေးရတယ်ဆိုပါတယ်။
ဒီအဆင့်မှာတော့ ပြုတ်ကျတဲ့ဒဏ်၊ အရှိန်ကြောင့် မှန်ကွဲတဲ့အခါမျိုးမှာ ဘယ်နေရာကပိုပြီးနူးညံ့သလဲ? အားနည်းချက်ရှိတဲ့နေရာတွေကို Frame Rate များများရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ကင်မရာတွေနဲ့ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတယ်ဆိုပါတယ်။
စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဘယ်လောက် အကြမ်းခံလဲ၊ မခံသလဲဆိုတဲ့အချက်ဟာ Display တစ်ခုထဲကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်လောက် Pressure အထိ အဖိခံနိုင်သလဲ?
SIM Card အထုတ်၊ အသွင်း၊ နားကြပ် အတပ်၊ အဖြုတ်လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာပါ စကားပြောတာမလို့ ခံနိုင်ရည်ရှိရဲ့လား?
ဖုန်းကိုဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲထည့်ထားလို့ မတော်တဆတက်ထိုင်မိရင်တောင် ကွေးသွားတဲ့ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိရဲ့လားဆိုပြီး အမျိုးမျိုး စမ်းသပ်ရတယ်ဆိုပါတယ်။
အပေါ်က Durability Test မှာ အခြေနေကောင်းပါရဲ့၊ စမတ်ဖုန်း Component တွေ မတူညီတဲ့ ရာသီဥတုအခြေနေတွေမှာ ပြောင်းလဲနိုင်သလား? ဥပမာ စိုစွတ်တဲ့မိုးရာသီနဲ့ အပူချိန်အပြောင်းလဲမြန်တဲ့နေရာတွေမှာရော ခံနိုင်ရည်ရှိရဲ့လားဆိုပြီး ပုံစံငယ်လေးဖန်တီးပြီး အကြိမ်ကြိမ်စမ်းသပ်ရတယ်ဆိုပါတယ်။
ဒီစမ်းသပ်မှုမှာတော့ ဖုန်းရေဒီယိုဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်သလဲ၊ လိုင်းဆွဲအား၊ အသံထွက်အရည်သွေးနဲ့ Wi-FI ၊ Bluetooth ချိတ်ဆက်မှုအားလုံး ဘယ်လောက်ရှိသလဲစသဖြင့် အခန်း ၂ ခန်းခွဲပြီး စမ်းသပ်ရပါတယ်။
Acoustic Test 1
ပထမဆုံး ပြင်ပအသံလုံးဝမပါဝင်အောင် အလုံပိတ်အခန်းထဲစမ်းသပ်ရပြီး ဒုတိယတဆင့်မှာတော့ လက်တွေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ပုံစံနဲ့ စမ်းသပ်ရပါတယ်။
Acoustic Test 2
စိတျဝငျစားဖှယျ Samsung ရဲ့ Display Panel ထုတျလုပျစမျးသပျပုံအဆငျ့ဆငျ့
Samsung ကတော့ စမတျဖုနျးတှနေဲ့ Wearable Gadget တှမှော အသုံးပွုနတေဲ့ Display Panel တှေ အဆငျ့ဆငျ့ ဘယျလိုစမျးသပျထုတျလုပျထားသလဲဆိုတာ ဖျောပွလိုကျပါပွီ။ စကျရုံကနေ Display Panel ထုတျလုပျပွီဆိုတာနဲ့ Reliability Test Group ကနေ အရညျသှေး ပွညျ့မီ၊ မပွညျ့မီ ပထမဦးဆုံး စမျးသပျပေးတယျဆိုပါတယျ၊ ဒီလိုစမျးသပျတဲ့ နရောမှာ အသုံးပွုခငျြတဲ့ Galaxy Device (ဥပမာ Galaxy A7 ၊ S9) အလိုကျ Specification ကှဲပွားနိုငျသေးပွီး အမြားဆုံး ၁၂ ကွိမျခနျ့ စမျးသပျရတယျဆိုပါတယျ။
ဒီစမျးသပျမှုမှာ Indoor ၊ Outdoor ၂ မြိုးလုံးပါဝငျပွီး Indoor အတှကျဆိုရငျ သဘာဝပတျဝနျးကငျြပုံစံအတိုငျး ပွုလုပျထားတဲ့အခနျးငယျထဲမှာ နရေောငျ၊ လမျးမီးအလငျးရောငျ စသဖွငျ့ Artificial Light တှနေဲ့ စမျးသပျကွပါတယျ။ ဒီလို သဘာဝနဲ့အနီးစပျဆုံး ပွုလုပျထားတဲ့စမျးသပျခနျးထဲမှာ Image Quality ဘယျလောကျရှိသလဲဆိုတာကို လိုခငျြတဲ့အနထေားလိုကျ အကွိမျကွိမျစမျးသပျရပွီး Indoor ၊ Outdoor ၂ မြိုးစလုံးမှာ Brightness ၊ Colour Clarity ၊ Image Noise နဲ့ တခွား Factor ဘယျလောကျရှိသလဲကအစ တငျပွရပါတယျ။
ဒါကတော့ Display Panel တဈခုအနနေဲ့ Thermal Control ဘယျလောကျကောငျးသလဲ၊ အထူးသဖွငျ့ အပူလှနျကဲတဲ့ Exynos Chip အသုံးပွုထားရတဲ့ Galaxy Device တှေ မိုဘိုငျးဂိမျးကစားတာဖွဈဖွဈ၊ ကငျမရာရိုကျကူးနတေဲ့အခါမြိုးမှာ အပူပိုထှကျတာမလို့ ဘယျနရောက Heat ပိုထှကျသလဲစသဖွငျ့ တိုငျးတာတယျဆိုပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ရစေို၊ ရစေိမျခံ Galaxy Smartphone တခြို့နဲ့ Smartwatch တှအေတှကျလိုအပျပွီး ဖုနျးအတှကျဆိုရငျ ရအေနကျ ၁.၅ မီတာမှာ နာရီဝကျအကွာ စိမျထားစမျးသပျရပါတယျ။
နာရီအတှကျဆိုရငျတော့ 5ATM Standard အတိုငျး ရကေူးရငျ Bend Stress ဒဏျခံနိုငျရဲ့လားစသဖွငျ့ တိုငျးတာပေးရတယျဆိုပါတယျ။
ဒီအဆငျ့မှာတော့ ပွုတျကတြဲ့ဒဏျ၊ အရှိနျကွောငျ့ မှနျကှဲတဲ့အခါမြိုးမှာ ဘယျနရောကပိုပွီးနူးညံ့သလဲ? အားနညျးခကျြရှိတဲ့နရောတှကေို Frame Rate မြားမြားရိုကျကူးနိုငျတဲ့ကငျမရာတှနေဲ့ အသေးစိတျကွညျ့ရှုစဈဆေးတယျဆိုပါတယျ။
စမတျဖုနျးတဈလုံးဘယျလောကျ အကွမျးခံလဲ၊ မခံသလဲဆိုတဲ့အခကျြဟာ Display တဈခုထဲကွညျ့ပွီး ဆုံးဖွတျလို့မရပါဘူး။ ဒါပမေယျ့လညျး ဘယျလောကျ Pressure အထိ အဖိခံနိုငျသလဲ?
SIM Card အထုတျ၊ အသှငျး၊ နားကွပျ အတပျ၊ အဖွုတျလုပျတဲ့အခါမြိုးမှာပါ စကားပွောတာမလို့ ခံနိုငျရညျရှိရဲ့လား?
ဖုနျးကိုဘောငျးဘီအိတျကပျထဲထညျ့ထားလို့ မတျောတဆတကျထိုငျမိရငျတောငျ ကှေးသှားတဲ့ဒဏျခံနိုငျရညျရှိရဲ့လားဆိုပွီး အမြိုးမြိုး စမျးသပျရတယျဆိုပါတယျ။
အပျေါက Durability Test မှာ အခွနေကေောငျးပါရဲ့၊ စမတျဖုနျး Component တှေ မတူညီတဲ့ ရာသီဥတုအခွနေတှေမှော ပွောငျးလဲနိုငျသလား? ဥပမာ စိုစှတျတဲ့မိုးရာသီနဲ့ အပူခြိနျအပွောငျးလဲမွနျတဲ့နရောတှမှောရော ခံနိုငျရညျရှိရဲ့လားဆိုပွီး ပုံစံငယျလေးဖနျတီးပွီး အကွိမျကွိမျစမျးသပျရတယျဆိုပါတယျ။
ဒီစမျးသပျမှုမှာတော့ ဖုနျးရဒေီယိုဘယျလောကျအလုပျလုပျသလဲ၊ လိုငျးဆှဲအား၊ အသံထှကျအရညျသှေးနဲ့ Wi-FI ၊ Bluetooth ခြိတျဆကျမှုအားလုံး ဘယျလောကျရှိသလဲစသဖွငျ့ အခနျး ၂ ခနျးခှဲပွီး စမျးသပျရပါတယျ။
ပထမဆုံး ပွငျပအသံလုံးဝမပါဝငျအောငျ အလုံပိတျအခနျးထဲစမျးသပျရပွီး ဒုတိယတဆငျ့မှာတော့ လကျတှပေ့တျဝနျးကငျြမှာ အသုံးပွုနတေဲ့ပုံစံနဲ့ စမျးသပျရပါတယျ။